अमेरिकामा कडाई ! नेपालीलाई जहाजबाट ल्याउँदै छोड्दै, कोको भए निष्काशीत ?
निष्काशित सबैलाई अमेरिकाले विमान चार्टर गरी केही दिनअघि काठमाडौं ल्याएको हो। गल्फ स्ट्रीम जहाजको भीएन ७४० एसएसको उडानबाट अमेरिकाले उनीहरुलाई निष्काशन गरेको हो ।
काठमाडौं उत्रिएपछि उनीहरुलाई प्रहरीको मानव बेचविखन अनुन्धान ब्युरोले विमानस्थलमा सोधपुछ गरेको थियो। अवैध ढंगबाट अमेरिका प्रवेश गरेका आप्रवासीहरुमाथि त्यहाँको अध्यागमनले निगरानी बढाएको छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
२०७८ चैत्र २९, मंगलवार प्रकाशित0Minutes 636 Views